Pink opal ibwe rinogona kumisikidzwa sezvindori, chishongo, mhete, rundarira - vhidhiyo
Isu tinogadzira zvishongo zvetsika neepinki opal ibwe semhete, mhete, chishongo, rundarira kana pendende. pink opal inowanzoiswa pa rose goridhe semabatanidzwa ekubatanidza.
Tenga zvakasikwa pink opal muchitoro chedu
Iri dombo rinokosha rinowanikwa chete mumakomo eAndes ePeru. Muchokwadi, ivo vanoonekwa sechipo kubva kuna Pachamama, wekutanga Inca mwarikadzi wekubereka uye Amai Pasi. Opal iri rakaomeswa silica gel, kazhinji iine pakati pe5 kusvika 10% yemvura. Naizvozvo haina nonstrystalline, kusiyana nemamwe matombo anokosha.
Fomura: SiO2 • n (H2O)
Chairo Gravity: 2.10 g / cc
Zvemukati Mvura: 3.20%
Chikamu chaMoh 5.5-6
Pink opal kubva kuPeru
Holistic mativi ePeruvia opal
Maererano nenhema dzePeruvia Maziso eOpal ibwe rinonyaradza rinogona kugadzirisa pfungwa uye kuderedza nyaya dzekurara. Kurara nemafuta ePeruvia kunotendwa kuporesa marwadzo asinganzwisisiki kubva kare.
Dombo rine simba rekuzorora, tsika inotiudza kuti inogona kubvisa chero kusagadzikana kubva mukutaurirana uye inobvumidza mazano kuyerera zvakanyanya. Iri ibwe rakanakisa rekudzikamisa pfungwa uye rinofungidzirwa kuti rinobatsira kwehusiku hwakanaka kurara.
Iri dombo rinoenderana nemoyo chakra, iro simba riri pakati nekunetsekana uye kutaurirana. Inonzi ndiyo yakasimba kupfuura mamwe mabwe ekuporesa. Inogona kuwedzera kugadzirwa uye kufemerwa, iro dombo rinosanganisirwa nerombo rakanaka.
Zvinoreva dombo kuporesa pamweya. Yakave yakakosheswa sedombo rakakura rekuporesa. Zvinonzi kusunungura makakatanwa uye kuunza rugare. Inokurudzirwa kune vanhu vanowanzo kuve nekushushikana uye kunetseka. Inogona kusunungura chero mhando dzekushushikana.
Muenzaniso pasi pe microscope
Isingawanzo nyore sei pink opal?
Dombo iri rinoshomeka uye rinongowanikwa munzvimbo shoma pasi pano. Matombo machena machena kana achicherwa.
Unoshandisa sei pink opal?
Pamweya zvinounza rugare uye kusunungura pamoyo wako, zvichibvumira munhu kuburitsa kushungurudzika kwakapfuura, kushushikana uye kushushikana. Inogona kushandiswa kuchengetedza kubatana kwemunhu kunzvimbo dzengirozi dzakashama uye dzakajeka. Nemanzwiro ibwe rinogona kubatsira avo vane kutya kwakanyanya, kunetseka kana kushushikana.
Unogona here kuisa pink opal mumvura?
Iyo dombo rinowoneka pachena kana iwe ukarichengeta munzvimbo yakaoma. Iyo pachayo ine mvura uye ine porous. Unogona kuiisa mumvura kana mutota nyoro kuti uichengete kwemakore.
Pink opal inokosha here?
Iwo akanaka emhando sontes anogona kuve anoshamisa akanaka uye anogona kutora mitengo kusvika ku100 US $ pa carat. Izvi zvinhu zvakawanda zvinosanganisira iwo ruvara, kujekesa, kucheka uye huremu hwekarati zvinozivisa kukosha kwese.
Ungaziva sei kana pink opal iri yechokwadi?
Mazhinji opal chaiwo ane zvisakanaka muvara, kana chimiro chakakombama kana chakakombama nekuda kwekuumbwa kwadzo nepo ibwe rakagadzirwa nemunhu rinoita serakakwana.
Tenga zvakasikwa pink opal mune yedu gem shopu
Isu tinogadzira zvishongo zvetsika neepinki opal dombo semhete, chishongo, mhete, rundarira kana pendende. pink opal inowanzoiswa pa rose goridhe semabatanidzwa ekubatanidza.
Pink bhururu mookaite
Tags Kubviswa, Mookaite, pingi